Maraykanka, 06 November 2019
Arbaco 6 November 2019
Soomaali ku Guuleystay Doorasho Ka Dhacday Mareykanka
Naadiya Maxamed, Safiya Khaalid iyo Cabdissalam Aaden ayaa xalay guulo ka soo hooyay doorashooyin ka kala dhacay gobollada Maine iyo Minnesota ee dalka Mareykanka.
Pompeo oo la hadal hayo in uu u tartamo Senate-ka
Xog-hayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa safarro is-daba-joog ah ku taga gobolka uu kasoo jeedo ee Kansas, waxaana la sheegayaa inay ku gadaaman tahay hadal hayn badan oo la xariirta inuu qorsheynayo inuu markale dib ugu tartatamo Aqalka Senatka.
Qareenka u doodaya shakhsigii fashiliyey faahfaahinta telefoonkii uu madaxweyne Donald Trump kula hadlay madaxweynaha Ukraine ayaa sheegaya in shakhsigaasi uu diyaar u yahay inuu ka jawaabo su’aalo qoraal ah oo ay qabaan xubnaha Aqalka Hoose ee xisbiga Jamhuuriga.
Aqalka Hoose oo meel mariyay qaraarka jago ka xayuubinta Trump
Aqalka Hoose ee Koongareeska Maraykanka ayaa shalay si rasmi ah u furay baaritaanka lagu samaynayo haddii uu Madaxweyne Donald Trump ku kacay falal ka baxsan awoodihiisa dastuuriga ah.
Pompeo: Dunida waa inay ka hortagtaa China
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka ayaa sare usii qaaday hadallada ay Mareykanka ku weerarayaan xisbiga Shuuciga ee xukuma China, isaga oo sheegay in Beijing ay isku dayeyso inay dunida qabsato, loona baahan yahay in laga hortago.
Washington Nationals oo ku guuleysatay koobka adduunka Baseball-ka
Kooxda Washington Nationals ee magaceeda loo soo gaabiyo NATS oo saldhigeedu yahey Washington, DC, ayaa xaley qaaddey koobka adduunka ee ciyaaraha loo yaqaan BASEBALL.
Kobaca dhaqaalaha Mareykanka oo sii yaraaday
Kobaca dhaqaalaha Mareykanka ayaa u muuqda inuu hoos u dhacay rubacii saddexaad ee sanadkan, sababo la xiriira shacabka oo hoos u dhigay lacagta ay qarash gareeyaan iyo maal-gelinta ganacsi oo yaraatay.